Asa 25 - Ny Baiboly
Asa toko 25
Paoly teo anatrehan'i Festosa - Ny nangatahany hotsarain'i Sezara - Ny resak'i Festosa sy Agripà mpanjaka - Paoly teo anatrehan'i Agripà.
1Nony tonga hateloana teo amin'ny faritaniny i Festosa, dia niala tao Sezara nankany Jerosalema, 2ka nanatona azy ny lehiben'ny mpisorona mbamin'ny loholon'ny Jody, hiampanga an'i Paoly. 3Niangaviany mafy izy hamely an'i Paoly sy handefa azy ho any Jerosalema, fa efa nanomana otrika hamono azy eny an-dàlana izy ireo; 4nefa novalian'i Festosa fa Paoly dia ambenana any Sezarea, ary izy hiverina any faingana rahateo, 5ka izay manam-pahefana amin'izany eo aminareo, hoy izy, no aoka hiara-midina amiko, dia hiampanga io lehilahy io raha misy nahadiso azy.
6Vao havaloana na hafoloana monja no nitoeran'i Festosa tao Jerosalema, dia nidina nankany Sezarea izy, ary ny ampitson'iny ihany dia nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ka nampaka an'i Paoly.
7Nony tonga izy dia nohodidinin'ny Jody avy any Jerosalema, sady nampangainy tamin'ny zava-dehibe maro izay tsy azony noporofoina akory. 8Ary izao no navalin'i Paoly hanalany tsiny ny tenany amin'izany: Tsy nanao ratsy velively aho, na tamin'ny Lalàn'ny Jody, na tamin'ny tempoly, na tamin'i Sezara. 9Nila sitraka tamin'ny Jody anefa Festosa ka namaly an'i Paoly hoe: Manao ahoana raha miakatra any Jerosalema hianao, ka dia any no tsaraina eo anatrehako, ny amin'izany zavatra izany? 10Fa hoy ny navalin'i Paoly: Efa eto amin'ny fitsaran'i Sezara aho, ka mby eto amin'ny tokony hitsarana ahy. Tsy nanisy ratsy ny Jody aho, araka ny fantatrao marina rahateo. 11Fa raha nanao ratsy aho, na misy heloka tokony hahafaty ahy, dia tsy mandà ny ho faty akory. Ary raha izay zavatra tsy misy fotony foana kosa no iampangan'izy ireo ahy, dia tsy misy olona manam-pahefana hanolotra ahy aminy. Fa mangataka hotsarain'i Sezara aho. 12Tamin'izay, nidinika tamin'ny mpanolo-tsaina azy aloha i Festosa vao namaly hoe: Nangataka hotsarain'i Sezara hianao, ka dia handeha ho any amin'i Sezara.
13Nony afaka andro vitsivitsy, dia tonga tany Sezarea Agripà mpanjaka sy Berenisy, hiarahaba an'i Festosa. 14Naharitra andro maromaro no nitoerany tao, ka nambaran'i Festosa tamin'ny mpanjaka ny amin'i Paoly. Hoy izy: Misy mpifatotra anankiray navelan'i Félix eto. 15Fony aho tany Jerosalema, dia nampangain'ny Jody tamiko izy io, sady nangatahiny hohelohina. 16Fa hoy ny navaliko azy ireo: Tsy fanaon'ny Romana ny manameloka olona raha tsy efa nifanatrika tamin'ny mpiampanga azy ny ampangaina, ka nahazo nanala tsiny ny tenany amin'izay iampangana azy. 17Dia tonga tatý izy ireo, ka tsy nangataka andro akory aho, fa ny ampitso ihany dia nipetraka teo amin'ny fitsarana sy nampaka ilay lehilahy. 18Nony nitsangana ry zareo mpiampanga, dia tsy heloka araka izay nampoiziko no nitoriany azy, 19fa ady hevitra momba ny fivavahany sy momba an'i Jesoa anankiray efa maty, nefa lazain'i Paoly hoe velona. 20Tsy hitako be ihany izay hamotorana izany zavatra izany, ka nanontany an-dralehilahy aho sao tiany ny hotsaraina any Jerosalema ny amin'izany. 21Dia nangataka hotsarain'ny emperora i Paoly, ka nasaiko nambenana mandra-pandefako azy any amin'i Sezara. 22Ary hoy Agripà tamin'i Festosa: Mba te-hihaino an'izany olona izany koa lahy aho! Dia hoy Festosa taminy: Rahampitso ihany dia hihaino azy hianao.
23Nony ampitso dia tonga Agripà sy Berenisy niseho tamim-boninahitra lehibe. Nony tafiditra tao an-trano fitsarana izy, nomban'ny tompon'arivo mbamin'ny lehiben'ny tanàna, dia nentina nankao i Paoly, araka ny didin'i Festosa. 24Dia hoy Festosa: Ry Agripà mpanjaka sy hianareo rehetra etoana: Io lehilahy hitanareo io no nampangain'ny Jody maro tamiko, hatrany Jerosalema ka hatraty koa, sy nataony antso avo hoe, tsy tokony hovelomina intsony ilay io. 25Raha toa ahy, dia ataoko fa tsy nanao na inona na inona tokony hahafaty azy izy io, saingy nangataka hotsarain'ny emperora izy, ka dia tapa-kevitra ny hampanatitra azy ho any aminy aho. 26Nefa noho ny tsy fahitako izay teny marina hosoratako hilaza azy amin'ny emperora, dia indro izy nentiko eto anatrehanareo rehetra, indrindra fa hianao, ry Agripà mpanjaka, mba hahitako izay hosoratako amin'ny fanadinana azy etoana. 27Satria ataoko fa tsy mety ny nampanatitra mpifatotra nefa tsy milaza izay zavatra iampangana azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0310 seconds